Midowga Musharaxiinta oo kala caddeeyey inay sii jiri doonaan iyo in kale + Video – Benaadir News Network
Midowga Musharaxiinta oo kala caddeeyey inay sii jiri doonaan iyo in kale + Video
Muqdisho (Benaadir News) – Golaha Midowga Musharaxiinta madaxtinimada Soomaaliya ayaa maanta shir gaar ah ku yeeshay magaalada Muqdisho, kadib markii maalin ka hor la kala saxiixday heshiis doorasho oo rasmi ah, waxayna isku raaceen inay sii jiraan.
Kulankii maanta ee xubnaha Midowga Musharaxiinta waxaa looga hadlay qodobo dhowr ah, oo ay ka mid yihiin aayaha dambe ee golaha iyo doorkooda ku aadan fulinta heshiiskii la gaaray, waxayna soo dhaweeyeen heshiiska laga gaaray khilaafkii doorashooyinka dalka.
Afhayeenka Golaha Midowga Musharaxiinta Daahir Maxamuud Geelle oo warbaahinta u faahfaahiyey waxyaabihii ay kulankaas uga wadahadleen ayaa yiri, “Waxaan maanta qabsanay shirkii ugu horeeyey kadib markii la saxiixay heshiiskii doorashooyinka. Waxaana bulshada Soomaaliyeed ugu hambalyeynaynaa heshiiskaas, waxaana cadeyneynaa inaan u taaganahay fulintiisa inaan ka qaada doono kaalinta nooga aadan.”
Sidoo kale waxa uu sheegay in shirkooda maanta ay uga hadleen qodobo ayaga si gaar ah u khuseeyey, isla markaana ay ka doodeen sidii ay u meel mari lahaayeen kaalintooda, isagoo xusay in golahan uu sii jiri doono.
Sidoo kale Daahir Geelle waxa uu sheegay in shirkii maanta ay ku go’aamiyeen in mahadcelin ballaaran ay u jeediyaan ciidanka Qaranka, madaxda dowlad goboleedyada, ra’iisul wasaaraha iyo dhammaan intii ka hor tagtay mudo kororsigii fashilmay ee uu sameystay madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Maxamed Cabdullahi Farmaajo.
Previous Fanaan Sharma Boy oo lagu xiray Garoowe + Sababta
Next Taariikhdii Cabdiqaasim iyo Cabdullaahi Yuusuf oo mar kale dib isu qoreysa